झुक्किएर अनलाइनमा २८ वटा कार किनेपछि… – Khabar PatrikaNp
झुक्किएर अनलाइनमा २८ वटा कार किनेपछि…
September 24, 2020 268
अहिले धेरै कारोबार अनलाइनबाट हुन थालेको छ । जर्मनीमा एकजना व्यक्तिले भुलबस अनलाइनमा यसरी क्लिक गरे कि २८ वटा टेस्ला कार खरिदका लागि अर्डर गयो ।
याे घटना जर्मनीमा भएकाे हाे । अनलाइनबाट मोडेल थ्री को टेस्ला कार खरिद गर्नका लागि क्लिक गर्ने क्रममा भुलबस २८ वटा कारका लागि उनले अर्डर गर्न पुगे । १४ लाख युरोका २८ वटा टेस्ला कार एकजना मानिसले एकैचोटी अर्डर गरेको सायद इतिहासमै पहिलो पटक थियो ।
एकजना मानिसले एकैचोटी १४ लाख युरोका २८ वटा टेस्ला कार अर्डर गरेको सायद इतिहासमै पहिलो पटक र टेस्लामा एकचोटी अनलाइनबाट खरिद गरिसकेपछि त्यस्ता कारको रकम फिर्ता नदिने नियम रहेकाे थियाे ।
सोसल मिडिया प्लाटर्फम रेडिटबाट सार्वजनिक भएको उक्त घटना अहिले विश्वका धेरै मिडियाहरुमा छाइरहेको छ । उक्त घ टनाको बारेमा उनै व्यक्तिका छोराले रेडिटमा पहिलोपटक लेखेका थिए । टेस्ला कम्पनीको वेबसाइटमा आएको गडबडीका कारण एउटा कार अर्डर गर्दा २८ वटा अर्डर भएको रहेछ ।
बसाइटमार्फत खरिद गर्दा कन्फर्म बटनमा क्लिक गर्दा खरिद कार्य सम्पन्न भएको मेसेज आएन । त्यसैले उनले पटक-पटक कन्फर्म बटन क्लिक गरे । त्यसरी खरिद गर्दा २८ पटक क्लिक भएछ जसका कारण उनीबाट २८ वटा कार अर्डर भएछन् ।
व्यक्तिको हकमा चाहिँ टेस्लाले आफ्नो नियम नै बदलिदियो, उनका २७ वटा कारको अर्डर रद्द मात्र गरिदिएन प्रतिकार २८ सय युरो धरौटी तथा १ सय युरो थप रकमसमेत फिर्ता । टेस्लामा एकचोटी अनलाइनबाट खरिद गरिसकेपछि त्यस्ता कारको रकम फिर्ता नदिने नियम छ ।
तर ती जर्मन व्यक्तिको हकमा चाहिँ टेस्लाले आफ्नो नियम नै बदलिदियो । उनका २७ वटा कारको अर्डर रद्द मात्र गरिदिएन प्रतिकार २८ सय युरो धरौटी तथा १ सय युरो थप रकमसमेत फिर्ता गरिदियो । जब त्यस टेस्ला कारले त्यस्ताे गरिदियाे त्यसपछि याे घटना सामाजिक संजालमा भाइरल बन्याे ।
Prevघरको तुलसीको बोटको छेउमा राख्नुहोस् यी ५ चिज, घरमा हुनेछ शुभै शुभ….!
Nextशास्त्र भन्छः सुत्ने समय यी ५ चिज सिरानीमुनी राख्नुस्
माता मनोकामना माइले सबैको रक्षा गरुन,भोलि कार्तिक ३० गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल !
यो नियम साउन ३० गते राति १२ बजेबाट भदौ १५ गतेसम्म लागू हुनेछ
गायन रियालिटी शो नेपाल आइडल तेस्रो सिजनको उपाधी सज्जा चौलागाईं चुमेका छन्